စာမူတိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်စာရင်းကိုမသုံးရသည့်အကြောင်းရင်း ၅ ချက်။ | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 11, 2006 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
ယနေ့ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခေါင်းကိုက်ခြင်းဟုယုံကြည်သောအရာများမှပြန်လည်သက်သာလာသည်။ ဒါကြောင့်ဒီ post ကိုငါအပျက်သဘောမထားဘူးလို့ငါမျှော်လင့်တယ်။ ဒါဟာတိုက်ခိုက်မှုမဟုတ်ဘဲသိချင်စိတ်သက်သက်ပဲ။
အကယ်၍ သင်သည်သူ၏ဘလော့ဂ်ကိုယခင်ကမစစ်ဆေးဖူးပါကအချက်အလက်များစွာရှိသည် Problogger။ ငါလတ်တလောမသိနိုင်သောအရာတစ်ခုမှာစာမူတိုင်းနီးပါးသည်အချို့သောစာရင်းတစ်ခုခုဖြစ်ရခြင်းဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာမှာစာရင်းအတွက်အားသာချက်များရှိပါသလား စာရင်းကိုကျွန်မအရင်စာရင်းထားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကညွှန်ကြားချက်ပေးတယ်၊ ငါဆက်သွယ်ချင်တဲ့ကျည်ဆံရိုးရိုးလေးလို့ထင်ရင်မှပဲ။ လူတွေက 'Top 10' နှင့် 'Top 100' နှင့်အခြားစာရင်းများအတွက်အသုံးများသောရေတွက်များကိုရှာဖွေလေ့ရှိသော်လည်း ProBlogger ၏အချို့စာရင်းများတွင် 'Top' ကိုမတွေ့ပါ။
သို့သော်၊ ပို့စ်တိုင်းနီးပါးသည်ရေတွက်ထားသောစာရင်းရှိသည်။ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး?
စာရင်းများသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပုဂ္ဂလဒိare္ဌာန်ရှိသည်။ မည်သည့်ခေါင်းစဉ်တွင်မဆိုလူတစ် ဦး သည်အချက်တစ်ချက်သို့မဟုတ်ရာတစ်ရာရှိနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ရေတွက်အရေးကြီးသနည်း
List items များသည်များသောအားဖြင့်တိကျသောထုတ်ပြန်ချက်များဖြစ်ပြီးဖော်ပြရန်နှင့်ဆွေးနွေးရန်နေရာများစွာမထားပါ။
တစ်ခါတစ်ရံတွင်နောက်ဆုံးသောပစ္စည်းများသည်သင်လိုအပ်သောရေတွက်ရန်ကြိုးစားရန်အတွက်စဉ်းစားထားပုံရသည်။ ငါ5လိုအပ်တယ်။
11:2006 pm တွင်အောက်တိုဘာ 9, 10
၁။ ပို့စ်တိုင်းတွင်စာရင်းများကိုကျွန်ုပ်မသုံးပါ။ ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံး ၁၀ ခုအနက်မှ ၂ ခုသာလျှင်စာရင်းများကိုစာရင်းပြုစုခဲ့သည်။
(၂) ပို့စ်ရဲ့စတိုင်ကိုကြိုက်တယ်။ သူတို့ကိုငါရေးဖို့လွယ်ကူတယ်၊ ဖတ်ရလွယ်တယ်။ ငါ၏အပို့စ်များကိုများထဲမှများသောအားဖြင့်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အများဆုံးမှတ်ချက်ပေးကြသည်။
၃။ ကျွန်ုပ်သည်တကယ့်ဘဝ၌စာရင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သည် - ကျွန်ုပ်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုစုစည်းရန်သူတို့ကိုတစ်နေ့လုံးအောင်အောင်မြင်မြင်ဖန်ဆင်းသည် - ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်လည်းသဘာဝကျသောရေးသားခြင်းဖြစ်သည်။
၄။ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များဖြစ်သည့် list items များနှင့်ပတ်သက်သောသင်၏အချက်သည်မှန်ကန်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်ရေးသားသော list များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုနှင့်နောက်တွင်စာပိုဒ်တစ်ခုရှိသည်။ တစ်နည်းပြောရရင်သူတို့ဟာငါရေးတဲ့စာစီစာကုံးတွေနဲ့အလွန်ဆင်တူတယ်။ စာပိုဒ်တစ်ခုစီရဲ့အစမှာနိဒါန်းဖော်ပြချက်တစ်ခုနဲ့ရှင်းပြပြီးနောက်မှရှင်းပြတယ်။ တစ်ခုတည်းသောတကယ့်ကွာခြားချက်မှာအချက်များကိုကျည်ဆံသို့မဟုတ်ရေတွက်။ အဓိကအချက်မှာ၎င်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
၅။ စာရင်းများ၏အကြီးမားဆုံးသောအကျိုးကျေးဇူးများအနက်တစ်ခုမှာ၎င်းတို့သည်စကင်ဖတ်နိုင်သည်။ အွန်လိုင်းစာဖတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောလေ့လာမှုများအရလူအများစုကစာဖတ်ခြင်းကိုပြန်မသွားခင်မှာလူအများစုကစာသားကြီးများကိုမဖတ်ဘဲအဓိကအချက်များအတွက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်းကိုဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြသည်။ ငါစာရင်းပုံစံကဒီနှင့်အတူကူညီပေးသည်ကြောင်းရှာပါ။
၆။ Certian နံပါတ်တစ်ခုသို့ရောက်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်စာရင်းပြုစုရန်မလွယ်ကူပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့် ၉၊ ၁၂ နှင့်အခြားထူးဆန်းသောနံပါတ်များကိုရေးခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးပို့စ်အတွဲသည် ၁၀ ခုစာရင်းသာပါ ၀ င်သည်။ သို့သော်၎င်း၏အရာအားလုံးထက် ပို၍ အမှားအယွင်းရှိသည် - ကျွန်ုပ်၏ပို့စ်ကိုရေးသည်။ ထို့နောက်အဆုံး၌ကျွန်ုပ်ရမှတ်များကိုရေတွက်။ ငါနှင့်အတူလိုက်သမျှအတူကပ်ပါ။
ဟုတ်ပါတယ် - ငါမင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုငါဘုတ်ပေါ်မှာယူတယ်။ စာရင်းများအလွန်အကျွံသုံးစွဲနိုင်ပြီး၎င်းကိုသတိပြုမိနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၎င်းကိုအနည်းငယ်ရောစပ်ရန်ကြိုးစားသည်။ သင်၏အကြံအစည်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် - လုံးဝတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်မဟုတ်ဘဲအပြုသဘောဆောင်သောဝေဖန်မှုများအဖြစ်မယူပါကကျေးဇူးတင်ပါသည်။
11:2006 pm တွင်အောက်တိုဘာ 9, 25
ဤသည်ကကျွန်ုပ်ကိုအတော်လေးနားလည်ရန်ကူညီပေးသည့်အလွန်ကောင်းသောတုံ့ပြန်ချက်ဖြစ်သည်။ တကယ်လို့အားမပြင်းမှီငါမပြောခဲ့ရင်မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုငါအရမ်းနှစ်သက်တယ်။ မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုငါနှစ်သက်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့အမြဲတမ်းမူရင်းဖြစ်ဟန်တူသည်။ ကျွန်ုပ်၏ feeds များအားပို့စ်များကိုပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း (ယနေ့ Google ၏ Writely နှင့် Spreadsheet ပေါင်းစည်းခြင်း) ကိုစူးစမ်းလေ့လာသောအခါ၊ များသောအားဖြင့်သင်၏အကြောင်းအရာသည်အကြောင်းအရာအသစ်တစ်ခုတွင်ဖြစ်သည်။
ငါ၏အ entry ကိုဖြေဆိုရန်အချိန်ထွက်ယူသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ၎င်းသည်“ ProBlogger” ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ပြီးတော့ - မင်းရဲ့ပြန်ကြားချက်ကိုမင်းစာရင်းပြုစုခဲ့တဲ့အချက်ကိုငါတကယ်သဘောကျတယ်။ 🙂
11:2006 pm တွင်အောက်တိုဘာ 10, 09
Doug ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မှတ်ချက်ကစာရင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ် thought
ငါ PB မှာမူရင်းအရာတို့ကိုကျော်ဆက်လက်ထားရန်ကြိုးစား - သတင်းကိုဖုံးလွှမ်းရန်လိုအပ်သည်ရှိရာရက်ပေါင်းရှိပါတယ်ပေမယ့်ငါထင်။
တုံ့ပြန်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် - ငါတကယ်တန်ဖိုးထားတယ်။